खरेललाई ढुंगेलको चुनौति !::netpatrika
खरेललाई ढुंगेलको चुनौति !
काठमाडौं, १४ फागुन । आफूलाई भेट्न आएको, आफूसँग फोटो खिचेको भन्दै गुण्डागर्दी पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूलाई खोरमा हालेर एसएसपी रमेश खरेलले चर्चा कमाइरहेका छन् । तर ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्ति खुलमखुल्ला हिंड्दा पनि उनले त्यसतर्फ भने कुनै ध्यान दिएका छैनन् ।
माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन् । सोही मुद्दाका कारण उनी यस पटकको संविधानसभामा उम्मेदवार समेत हुन पाएनन् । तर पनि उनी कानुनलाई चुनौती दिँदै खुलमखुल्ला हिंडिरहेका छन् ।एसएसपी खरेलले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदै आफू कुनै पनि किसिमको दबाबमा नझुक्ने बताइरहेका छन् । तर, उनै खरेललाई माओवादी नेता ढुंगेलले चुनौती दिइरहेका छन् । नेता ढुंगेल ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्याका दोषी प्रमाणित भएका व्यक्ति हुन् । सर्वोच्च अदालतले समेत उनलाई दोषी ठहर गरेकाले उनी कतैबाट उम्कने सम्भवना छैन । तर उनीजस्ता व्यक्तिलाई खरेलले किन समात्ने आँट गरेको छैनन् ?
ढुंगेल मात्र होइन, अदालतले दोषी ठहर गरेका धेरै व्यक्तिहरू समाजमा छाती फुलाएर हिंडिरहेका छन् । माओवादीकै नेता कालिबहादुर खाम पनि प्रहरीको मोष्टवान्टेड सूचीमा छन् । यदि उनले साँच्चिकै आफूलाई राम्रो प्रहरी अधिकारी रुपमा स्थापित गराउने हो भने उनले टोले गुण्डा मात्र नभई अपराधी पुष्टि भइसकेका नेतालाई पक्राउ गर्न सक्नुपर्ने धेरैको भनाइ छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि गुण्डा मात्र पक्राउ गर्छन् कि कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिन सानाठूला सबैलाई समान रुपले हेर्छन्, त्यो धेरैको चासोको विषय बनेको छ ।
– दृष्टि साप्ताहिक